[ 2 hours ago ] Inter Milan oo guuldaro xanuun badan dhabarka u saarisay Juventus Horyaalka Italy	Horyaalka Italy
HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo heshay fursad ay kula soo saxiixan karo laacibka Real Madrid garabka weerarka ah ugu ciyaara ee Lucas Vazquez
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa soo jeediyay in ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Spain Lucas Vazquez uu dhawaan saxiixi doono heshiis cusub inkastoo ay jiraan warar la xiriirinaya inuu u wareegayo Arsenal iyo Chelsea.
29 jirkaan ayaa 215 kulan u ciyaaray Los Blancos tartamada oo dhan, si kastaba ha ahaatee, qandaraaska uu haatan kula joogo Los Blancos ayaa dhamaan doona bisha June ee soo socota, dhawaanahan waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan mustaqbalkiisa.
Vazquez wuxuu si joogto ah ugu ciyaarayay kooxda Zinedine Zidane inta lagu gudajiray xilli ciyaareedkii 2020-21, isagoo ciyaaray sagaal kulan tartamada oo dhan, oo ay kujirto 90ka daqiiqo ee buuxa ee uu wajahayay kooxaha Serie A, Inter Milan ee Champions League Arbacadii.
Ka dib guushii 2-0 ee San Siro, Zidane ayaa amaanay amaankiisa weeraryahankaan wuxuuna si maldahan u sheegay inuu dhawaan saxiixi doono heshiis cusub oo waqti dheer ah oo uu kula sii joogayo caasimada Spain.
“Had iyo jeer wax walba ayuu inaga siiyaa. Marwalba waan qiimeyn jiray isaga iyo waxa uu nagu siiyo garoonka dhexdiisa, ”Zidane ayaa u sheegay Movistar +.
“Haatan wuxuu fursad u heystaa inuu na tuso waxa uu yahay. Wuxuu noo ahaa ciyaaryahan dhalinyaro ah qalbigiisana Madrid ayuu ku haystaa.
Waan ku faraxsanahay isaga iyo kooxda. Waa ciyaaryahan muhiim ah kooxduna way ogtahay. Waxaan u maleynayaa inay dhici doonto inuu cusbooneysiiyo. ”
29 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa horay loogu xamanayay koox kale oo reer London ah oo lagu magacaabo Tottenham Hotspur.